Aragtida kama sinnaan karno Arligana kuma kala sarreyn karno – Maandoon
May 7, 2017 Maxamed Cabdilaahi 0 Comment
Hadda ayaa aynu garan ama mar aanay macno lahayn in la gartaa; mar ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen! Xawaaraha waqtigu ma yaqaan hakad iyo kaadin midna , fursaddii aad mar lumiso waa aad lumisay ama sahwi ha kaaga lunto ama jahli ama kibir waxaanay ka goan tahay aayahaaga qofeed iyo midka ubadkaaga , taayirka taariikhda ee is rogaya haddii aan la socon wayno kolba meesha uu ku beegan yahay waxa qasab ah in aan si dhakhso uga mid noqonayno tagtada.
Taariikhda iyo garashada biirtay ee aadanaha waxa ku jira casharro iyo xogo sugmay , waxa ka mid ah in loollanka haddii la nabadeyn waayo uu mar kasta ku lammaan yahay dulmi iyo akhlaaq darro. Dad is haya haddii ay doortaan is muquunin waxa mar kasta meesha yimaada dhaawac weyn oo gaadha halbeegga cadaaladda iyo garashada garaadka mutaxan (العقل المجرد) oo xintanka iyo muquuninta dheeraatay waxa ay utumo ku beeraan garaadka. Matalan, Daacish waxa ay ka dhalatay is muquunis fikir oo xadka ka baxay heer waxa ay garta u arkaan fuliyaanna yahay wax aanu caqli kasta oo aan doorsoomin qaadan karin. Masar heerkii xumaa ee ay gaadhay is muquuninta kooxaha siyaasadeed waxa ay keentay in badanka calmaaniyiinta dalkaasi ku tuntaan tiirarkii dadnimo oo dhan iyo wax kasta oo akhlaaq lagu sheegi karo iyaga oo si waxuushnimo ah ugu wiirsaday una taageeray dulmigii lagu la kacay Ikhwaanka iyo shacabkii taageeray , kaligoodna ma ahayn ee xataa Salafiyiin xintan kala dhexeeyay Ikhwaanka ayaa akhlaaq xumo ku kacay oo ku wiirsaday!
Dadka intii is ahba waxa ay wadaagaan dal iyo diirnax keena in ay wax wada qabsadaan , wax-wada-qabsigaa ayaana ay ku horumaraan , haddii aanay hore u aqoonsan wadaagga ama uu ka doorsoomo isu diirnaxu waxa meesha ka baxa wax-wada-qabsi ka dibna horumar ma jiri karo , lidkeeda haddii loollanka la maareyn waayo waxa dhasha burbur iyo hagaas !
Bulshadeena soomaalida qofkii raba in uu mid kale shisheeyeeyo marnaba ma aha qof dan Soomaaliyeed ka fikiray. Xero-ka-saarku (الاقصاء) siyaasad ahaan waa astaan fashal oo in dawladdu dadka qaybo ka mid ah firdhiso waxa ay astaan u tahay in nidaamkaasi aanu in badan sii jiri doonin, mudnaynna , inta uu jirona in uu khasaare la jiro ; waxa la mid ah midda fikir iyo dhaqan ! Haddii wanaag la rabo waa in la is aqbalo iyada oo aanay ahayn in isku mid la noqdo ; qofkii raba in dadku isku fikir noqdaan ama koox qudha noqdaan waa qof mucaarad ku ah ama ka dhoohan dhaqanka abuureed ee basharka iyo waliba raadka taariikhda ee gadaal loo milicsan karo ! haddii aan ku soo daalnay in reeraha Soomaalidu is muquuniyaan oo hadda aan rabno in la is wada aqbalo waxa doqonniimo ah in la bilaabo reero kale oo kooxo fikireed ah oo dib u bilaaba is muquunintii ! Qabiilka aad doonto ka tirsanow ee waa in aad ogolaato in deegaanka aanad kali ku ahayn cidna ka badsan karin ee aad ku tahay uun saamile la wadaaga dad kale, horumarkiinuna ku xidhan yahay wax-wada-qabsigiina. Si la mid ah haddii aad firqo ama aragti gooni ah ka tirsan tahay ha doqonoobin oo haku fikirin meeshan adiga iyo maankaaga waxa ku jira ayuun baa mudan! Ciddii aan kooxdiinna ahaynna ma gaydo ama ka dafirba in ay xaq ku leeyihiin meesha!
Wadaadada Soomaalidu iyaga oo kala firqooyin ah waxa ay ka abuurmeen islaamnimada Soomaalida oo ay u tagtay dulundulceynta taariikhda oo mawjadba hab u dhigayso nolosha dhaqan-dhaqaale ee dadka , door muhiim ah ayaa ay ku soo lahaayeen walina ku leeyihiin , qaarkood ayaa khayr mooyi e aan shar la sheego ku lug yeelan ; hore ayaa ay u soo jirtay ilaa haddana waa ay jirtaa oo waxa jira wadaaddo Soomaali ah oo nolosheena kaga jira safka gobonimoda iyo samataliska , sidaa lidkeeda waa ay jiraan oo caad ma saarna kuwo halaag iyo hoog bulsho ku hawllan waana kuwa fikirkoodu ku foogan yahay uun dil ay fuliyaan ; labadaa daraf dhexdoodana waxa daadsan wadaad ! waxa ay la mid yihiin uun bulshada qaybaheeda kale ee qaar u dhexeeyaan wiil samafalka dadkiisa jilicsan naftiisa nidar kula galay iyo mid meel isbaaro u dhigtay si uu kuwa jilicsan u dhaco !
Yeelkeed e marka wada lahaansho ay tahay qofna marti ma aha haddii laga dhigana waa dulmi iyo duugsi , in wadaadka la xumeysto mar waa gef marna waa garasho xumo ; mar waa gef oo wadaad waxba iskama galin ! kuwo gob ah oo samo talis ah oo hore u socod ah ayaa ku jira , marna waa garasho xumo oo qof isu xilsaaray danta bulshadiisa in uu wadaadka ka sooco oo uu si gaar ah u colleysto ma aha arrin caqli ahaan door ah waayo wadaadku waxa uu ka tirsan yahay bulshada ! Oo adiga wadaadka maaggan yaa ku yidhi waa aad saxsan tahay uun ?! In aanay cidna wada saxsanayn oo laga garaabo ayaaba fure u ah in la is aqbalo. Wadaadka Soomaaliga ah waa in uu isna garawsadaa in uu dad ku dhex nool yahay doorkiisana uu ka dhex raadiyo oo isaguna yahay qof caadi ah oo dadka ka mid ah same iyo xumebana gali kara, dadkuna leeyihiin garasho ay ku xukumi karaan! Wadaadka Soomaaliga ah ee danta umaddiisa maanka ku hayaa waa in uu baddalo caqliyadda ah in isagu uun dadka naqdiyo/dhaleeceeyo.
← Jahliga barakaysan .. sebenka kala guurka diinta iyo dhaqanka! (Bandhig buug)
Maxaa u dhexeeya culimada xorta ah iyo kuwa madaahibta? →